Ukusebenza neMiphetho efihliweyo kwiSketchUp
Ukujonga ngononophelo kwisikhephe esincinci kulo mzobo ulandelayo, qaphela indlela imiphetho embindini ebonisa ngokucacileyo ngayo ukuba yenziwe ngeziqingatha ezibini? Ukuba ubunokucima loo miphetho, yonke imodeli yakho yeSketchUp iya kunyamalala kuba loo macala achaza ubuso, kwaye ngaphandle kwemiphetho, ubuso abunakubakho.
Iipilisi ezingama-54 543 vs 512
Endaweni yokucima ezo ndawo zingafunekiyo, ungazifihla ngokusebenzisa i-Eraser ngelixa ucofa iqhosha leShift. Jonga umfanekiso wesibini nowesithathu wesikhephe? Xa ubambe iShift njengoko utsala ngaphezulu kwemiphetho ofuna ukuyifihla nge-Eraser, ziyaphela.
Gcina ukhumbula ezi nkcukacha zibalulekileyo zibalulekileyo malunga nemiphetho efihliweyo:
Imiphetho efihliweyo ayihambanga ngonaphakade. Ngokwenyani, oku kuyasebenza nakweyiphi na ijiyometri efihliweyo kwimodeli yakho. Ukubona okufihliweyo, khetha Jonga → Efihliweyo ngeJometri. Ukuyifihla kwakhona, khetha nje into enye.
ungathatha ipepcid ngelixa ukwi-omeprazole
Ukuhlela imiphetho efihliweyo, kuya kufuneka uyenze ibonakale. Ukuba ufuna ukwenza utshintsho kwimodeli yakho ebandakanya imiphetho osele uyifihlile, ungajonga ijiyometri yakho efihliweyo (jonga inqaku elandulelayo) okanye ungazifihli ngokupheleleyo. Vele ubonise ijiyometri yakho efihliweyo, ukhethe imiphetho ofuna ukuyityhila, kwaye ukhethe u-Hlela → Ungazifihli → Ukhethiwe.
ukuba isikolo esiphakamileyo senziwe imali
I-adderall xr 30 mg
Ngaba i-prednisone inokubangela uti
ungathatha ihydroxyzine kunye nebenadryl